काठमाडौंमा घर नभएका विधार्थी भोक भोकै – MTV NEPAL
in Uncategorized April 9, 2020	Comments Off on काठमाडौंमा घर नभएका विधार्थी भोक भोकै 447 Views
चिनको वुहान प्रान्तवाट फैलिएको कोरोना भाईरसको (कोभिड–१९) हालसम्म करिव २०५ भन्दा वढि मुलुकका लगभग १६ लाख मानिसहरुमा संक्रमण देखा परिसकेको छ भने करिव ९० हजार जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् । अमेरिका यूरोप लगायत विकसित देशहरुमा यो रोगको प्रभाव अत्याधिक मात्रामा परेको छ । एक मानिसवाट अर्को मानिसमा सजिलै सर्ने यो रोगलाई विस्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको घोषणा गरीसकेको छ भने विश्वका प्राय सवै मुलुकले वन्दावन्दि (लकडाउन) को घोषणा गरी मानिसहरुको भेटघाट तथा आवतजावतमा रोक लगाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, नेपालले पनि यहि चैत्र ११ गतेदेखि वन्दावन्दि (लकडाउन)को घोषणा गरी मानिसहरुको भेटघाट तथा आवतजावतमा रोक लगाएको छ । जसका कारण अत्यावसयक वाहेकका सवारीसाधनहरु तथा आममानिहरुको हिंडडुलमा पुर्णरुपमा रोक लागाईएको छ भने सरकारी घोषणको उलंघन गर्नेहरुलाई पक्रउ तथा कारवाही थालिएको छ । पुर्व तयारी तथा नागरीकहरुलाई आ–आफ्नो ब्यवस्थापनको लागि यथेष्ट समय विनानै आनायासै वन्दावन्दीको घोषणा भएको यो अवस्थामा मानिसहरु जहाँको त्याहिं रहन वाध्य भएका छन् । जसका कारण दैनिक मजदुरी गरी खाने मानिसहरु तथा पढाईको शिलशिलामा आफ्नो घर छोडेर काठमाडौं लगायतका सहरहरुमा डेरागरी वस्ने विद्यार्थीहरु ठुलो मारमा परेका छन् ।
सरकारले स्थानिय निकाय मार्फत विपन्न वर्ग तथा दैनिक मजदुरी गरीखानेहरुका लागि राहातको ब्यवस्था गरे ता पनि आफुहरुको लागि भने कुनै ब्यवस्था नगरीएको विद्यार्थीहरुको गुनासो रहेको छ । खर्च सामल सकिएका यस्ता विद्यार्थीहरुको लागि राहत वितरणको जिम्मा पाएको स्थानिय निकायले के गर्दै छ त ?
स्थानिय निकायको भनाई
यो संकटपुर्ण परिस्थितीमा, परिवार संग टाढा हुनुको पिडा अनि खाध्य सामाग्रीको अभावको छट्पटिले, देशकै सुनौलो भविष्य विद्यार्थी वर्गमा कतै समस्या त उत्पन्न हुने होईन ? सरकार यस कुरामा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।खाध्य संकटमा परेका विद्यार्थीहरुको पहिचान गरी यथासक्य चाँडो राहत उपलब्ध गराउनु अत्यान्त जरुरी देखिन्छ ।
Previous: हत्या अभियुक्त उमेश यादव फर्किए , अरुको के हुन्छ ?
महिलाको किटानी जाहेरीपछि महरा पक्राउ
प्रेमचन्द्र झा काठमाडौं । बलात्कार प्रयासका आरोपी निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आइतबार साँझ पक्राउ गरिएको छ । पीडित भनिएकी महिलाले शुक्रबार किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले ...